Orinasa tsy manara-dalàna : Hampanantsoin’ny polisy ireo mpaninjara ny vokatra Tiko -
AccueilSongandinaOrinasa tsy manara-dalàna : Hampanantsoin’ny polisy ireo mpaninjara ny vokatra Tiko
Orinasa tsy manara-dalàna : Hampanantsoin’ny polisy ireo mpaninjara ny vokatra Tiko
03/02/2018 admintriatra Songandina 0
Mitohy ihany ny tsy fanarahan-dalàna ataon’i Marc Ravalomanana. Araka ny efa fantatra mantsy, dia mbola tsy tokony afaka mihodina ny orinasa Tiko na ny orinasa AAA, amin’izao fotoana izao. Marihina fa misy mpitory mantsy ity orinasan-dRavalomanana ity.
Raha ny marina, dia tsy manara-dalàna ny orinasa Tiko. Tsy mahaloa hetra amin’ny Fanjakana ary koa tsy mahaloa vidin-jiron’ny orinasa Jirama , ary ny goavana indrindra dia mbola mangalatra jiro ihany, mba ahafahany mihodina antsokosoko.
Noho izany indrindra, dia efa nakaton’ny Fanjakana ny orinasa Tiko sy ny ozinina mpamokatra ireo vokatra isan-tsokajiny eny Andranomanelatra, Antsirabe, noho ireo antony voalaza etsy ambony ireo.
Tato ho ato izay anefa, dia saika ahitana ireo mpaninjara vokatra Tiko ranofotsiny ireo faritra maromaro eto Antananarivo. Izany hoe, mbola mihodina, toa ny ara-dalàna ihany izany ny orinasa Tiko, ka afaka mamoaka ireo vokatra vokariny eny amin’ireo mpaninjara voatokana ho amin’izany.
Noho izay indrindra, dia tsy nitaza-potsiny ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny manoloana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fandikan-dalàna ataon’ny orinasa Tiko sy Marc Ravalomanana fa nandray fepetra manoloana izany. Araka izany, dia fantatra ankehitriny fa hampanantsoin’ny polisy ekônômika etsy Ambohidahy ireo mitana ireo trano mpaninjara voatokan’ny orinasa Tiko, ny alatsinainy 5 febroary izao. Izany hoe, hanaovana fanadihadiana sy alaina am-bavany avokoa izy ireo mahakasika ireo vokatra Tiko amidiny.
Raha ny marina, dia tsy misy hidiran’ny Fanjakana izao fampanantsoana izao fa ny lalàna no hampiharina sy manosika ny tompon’andraikitra hampiantso ireo mpaninjara voatokana rehetra eto Antananarivo. Hatreto, dia samy miandry ny valin’ny fihainoana am-bavany ireo mpaninjara ny rehetra, ary samy miandry izay fepetra mety ho raisin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny manoloana ny tsy fanarahan-dalàn’ny orinasa Tiko sy ny mpitantana azy.
Raha ny vaovao hatrany, dia ireo fikambanan’ny mpaninjara mihitsy mantsy no mitaky ny fanaovana fanadihadiana lalina mahakasika ny fiparitahan’ireo vokatra Tiko, amin’izao fotoana izao.
Mazava. Mitombo 40 MW ny famatsiana herinaratra ho an’Antananarivo Renivohitra. Notonkanana, omaly, teny amin’ny foibem-pamokarana herinaratra, teny Mandroseza, mantsy ireo milina nohavaozina eo anivon’ny ivo-toeram-pamokarana Symbion Power. Nitokana ity ivo-toeram-pamokarana nohavaozina ity ny Filohan’ny Repoblika ...Tohiny
Mpitandro filaminana : Mampitandrina ny efa zatra mpanakorontana